SENTAfrica iyo LIVINGWAY WAXBARASHADA » Maalgalinta our Future
September 20, 2016 Jamie JamiesonDIRAA Africa News
LIVINGWAY WAXBARASHADA waxaa hore u muujinaya sida ay hawl waara keentay dhinaca tallaabo bulshada isku filan. In si ay u koraan ka soo salka this, waxay u baahan doontaa si loo hubiyo in sahayda korontada adag iyo sidoo kale ballaarinta ilaha dakhliga ay. Si taas loo sameeyo LWE this ayaa loo aqoonsaday gaaban, ujeeddooyinka muddada-dhexe iyo mid dheer oo sharaxay baahida loo qabo in ay raadsadaan lacag dheeraad ah.
maaliyad-our-mustaqbalka download PDF
Fikradda ah horumar waara ayaa mararka qaar ku seegay goolkii of xanaajin isku filnaashaha. Taasi waa, halka la walaacsan in protectively dhaqmaa mustaqbalka, iyo dayactirka luminayey tacaalida, Hadafka ugu weyn ee awood qaataha ah ee horumarinta inay leedahay geeddi-socodka ayaa inta badan iska fududaysto.
Si aad u shaqeeyaan si qayb ahaan guulaysta deficiency this LIVINGWAY WAXBARASHADA keenay faragelinta waxbarasho la siiyey oo loo marayo abuuridda of il dakhli. The-gelinta ku lugta leh hoggaamiyayaasha bulshada ee heer cawska-xididdada bilowgaba, iyo ku dhiirri-aragti loo dhan yahay dhinaca ka qayb of jihada urureed.
Fikradda hore ahaa guriga martida ah bixinta dakhliga si abuurka macalinka in laga yaabo in loo qaadeen oo iskooda u ah oo aan saamayn ka danaha ka baxsan (gaar ahaan danaha 'deeq'). Tani balaariyay in ay u oggolaadaan danaha bulshada in loo adeego hogaamiyeyaasha bulshada kuwaas oo u dhisi kari waayay raasamaal bulsheed, fududeeyo sarrifka xirfadaha taas oo iyana kor loogu qaado awooda dhaqaale. Tani ayaa la fuliyay in our RealAid barnaamijka.
Bixinta kuwa ka baxsan caawimada caadiga ah la siiyo dadka ka yari oo galley ah waa uun bilowga. Dhisidda xiriir wanaagsan ee bulshada ayaa ka muhiimsan. Waa maxay soo socota waa in si qoto dheer dood ku saabsan waxa la sameeyo si looga hortago dhibaato ka dhacda.
wada hadal RealAid loogu talagalay bixinta xal isku filan a. Hoggaamiyayaasha bulshada aqoonsado doonaa kuwa awood u leh xirfadaha iyo aqoonta la wadaago beeralayda yar guul.
hoggaamiyayaasha maxalliga ah in ay ka qeyb xal ah – ma sugayaan gacanta dheceen laakiin abaabulka RealAid qaab tababarka beeraha ee ay bulshada.
RealAid ayaa lagu bixiyey by dakhliga ah ee Guest LIVINGWAY Golaha. martida The House waa il ka mid ah dakhliga. Isticmaalka hoolka sida xarunta shirka a waa mid kale. Recently salaysan LWE loo isticmaalay by kooxaha diiniga ah iyo dhallinyarada.
Kale il dakhli suurtagal waxaa laga heli karaa dheeriga ah ee a Hammer Mill. Waayo, kan aan u baahanahay adag a korontada.
baahida kale ee guriga martida iyo kooxaha kuwaas oo la isticmaalayo goobta waa a ceel ka kaas oo la cabbo oo nadiif ah oo biyo lagu dhaqo laga heli laga yaabaa in. Waqtigan xaadirka ah guriga martida u isticmaalo biyo ka gudubno-biyo macaan gal in ay oggolaadaan in lagu dhaqo iyo in la buuxiyo ceelal musqusha. Biyaha la cabo waa la tuulada keenay kala badh kiiloomitir ka fog.
Inta badan shaqada dhismaha la dhameeyo at LIVINGWAY WAXBARASHADA laakiin waxaa weli ka shaqeeyaan in la sameeyo on goobta soo dhoweynta. Waxay waa in heerka saqafka laakiin u baahan yahay saqaf, plastering, glazing iyo rinjiyeynta.
Tababaraha The for WAXBARASHADA LIVINGWAY ayaa isticmaalaya baabuur si ay u fuliyaan ganacsiga ee NGO, laakiin gaariga ayaa dhawaan la dumiyey illaa iyo heer ay shaqo dheeraad ah ma sii jiri lahaa dhaqaale. Waxaa la soo jeediyay in inta badan uu shaqada hadda loo qaadi kari waayeen ahaayeen ayuu u leedahay in a motor-baaskiil.
ujeeddooyinka muddada - Dhexdhexaad: kharashka
Ugu horeyn, baahida our hadda maalgelinta waa in ay xal u baahan waayo, xoog our. Waxaa jira keliya laba doorasho. Escom dhaxe sahayda iyo xal qoraxda.
Solar: Dhab ahaan baan u isku dayay in ay awoodda goobta la soo diyaariyeen ah ee afar milicsiga lala afar baytariyada waaweyn. Nidaamka cadaato dhowaad waxtar ah dhawr bilood gudahood. Xataa marka shaqeeya awoodda kaliya la siiyo .6 Kw saacaddiiba mudo ah dhawr saacadood ka dib markii qorraxdu ugu dhacday. Waxaa socon lahaa wax yar ka dheer haddii nalalka oo keliya ayaa la isticmaalay. Waxaan loo baahan yahay nidaam aad u adag. Inta badan oo ka mid ah kulamada taararka iyo caag hore u joogo, laakiin waxaan u baahan tahay si aad u hubiso in xal kasta oo qoraxda ahaa oo awood u siinaya aadka ah 10 kw saacadiiba inta lagu jiro maalinta iyo ilaa nus ka mid ah in inta lagu jiro fiidkii. 1 Kw loo baahan lahaa habeenkii oo dhan. Waxaan leenahay hal quote oo ah £ 32,000, waayo, gelinaya in nidaamka noocan oo kale ah
Escom: Qiimaha sameynta transformer ah oo na gelinaya on dhaxe noqon lahaa agagaarka 15 million Mar. (£ 15,000). Tani waxay awood u lahaa LWE si ay u fuliyaan dhammaan hawlaha lagama maarmaanka u ah barnaamijka RealAid ay, Hal abuurka macalinka iyo hawlaha la qorsheeyay kooxaha shaqaaleynta goobaha our.
Waxa ay noqon doontaa suurto gal ah in la isticmaalo qolka kaydka iyo hadda meesha uu dhagax. Waxaan u baahanahay lahaa si loo soo dajiyo sahayda korontada ku haboon si ay u noqoto mid dhab ah. Waxaa ku saabsan tahay 5000 dadka deggan tuulooyinka ku wareegsan, kuwaas oo ka faa'iidi doonto dhagaxshiidkana dhexdaada ku yaal dhaw halka ay ku nool yihiin goobta LWE ah.
Waxaan leennahay dhismo ku habboon goobta dhagax wax ku haboon dubbe in kici lahaa oo kaliya lacag dhan £ 500. Si kastaba ha ahaatee, ka hawlgala dhagax wax ku taagnaa, haddii aannu yeelan karaan sahayda korontada (qoraxda ama Cuntada dhaxe). Waxaan ka iibsan kartaa oo kaliya mid ka mid DIB waxaan leenahay dhaxe ama tamarta qoraxda ku rakiban. Waxaan isticmaali kartaa matoor laakiin kharashka socda uu noqon doono mid aad u sareeya.
Xaqiiqdii waxaan u baahanahay ceel on goobta. Xataa mid la shaqeeya gacanta sida mid ka mid ah tuulada. Mid ka mid kale NGO sii ceel qodo, waayo, 3.1 m MK (£ 3,100). Haddii aan ka heli karto korontada ah bamka biyaha noqon lahaa xal fiican. Waxaan sidoo kale u baahan tahay haanta biyaha biyaha ceel.
Saqafka on dhaweynta
dhamaystirka mashruuca dhismaha ayaa lagu qiyaasay in ku dhawaad ​​kacaysaa 3 -4 million Malawi Kwacha (£ 3-4,000). Waxaan qabaa waxaa laga yaabaa inay qiyaasta yar oo aan waajibka miisaaniyadda ugu yaraan 5 m Mar. (£ 5,000). Inkasta oo aan wax hoolka weyn qolalka shirka yaryar iyo xafiis caawin lahaa orodkii siman ee xarunta Teaching labadaba iyo guriga Martida ee.
Waxaan leenahay in ay go'aan ka halkaas bixinta this haboon in qorshaha. waxaa lagama maarmaan ah NOW? Mise waxaa la sugi karin? Qiimaha hore ee loo adeegsanayo gaadiid sida laga yaabaa in 1.2 million Mar. (£ 1,200). Kharashka orodka sanadlaha ah motor-baaskiil laga yaabaa in mar kale sida ugu badan.
Waxaa la samayn karaa in bilaha soo socda - xataa sannadka a. laakiin waxa ay ka dhigan tahay in mashaariic kale oo muddo gaaban la dib waxaa laga yaabaa in maxaa yeelay waxa ay kordhisaa kharashka orodka. Waxaa hubaal waa Ujeedada muddo dhexdhexaad ah laakiin waa maxay mudnaanta? (eeg shaxda).
Sida dalalka baaskiil wuxuu keenaa la kharashka orodka sare. Waxaa guuro kharashka socda ilaa 4.5 million Mar. (£ 4,500) halkii sanno oo tanuna waa iyada oo aan sii kordhaya our dakhliga. Waa sababta aan u malaynayaa in aan u baahanahay si aad u hesho korontada iyo dhagax dubbe ka hor aannu dhawrnaa baaskiil.
Qorshaha ayaa waxaa ka mid ah isagoo ah mini-bus, ama gaari kale oo hubaal waa Ujeedada a muddada dheer. Tani waxay noo baahan tahay si uu u doondoono lacag dheeraad ah labadaba qiimaha bilowga iyo dayactirka. macquulka ah 5 -15 m Mar. (£ 5,000- £ 15,000)
Furitaanka Door ah:
Samaynta waxan oo dhan suurto gal LIVINGWAY WAXBARASHADA (KIRADA) tukanayo-hawlgalayaasha in lagu maalgeliyo hawlaha kor ku xusan. Oo ay la socdaan hay'ad samafal waalid ay SENTAfrica, iyo kiniisadda Methodist ee Niton LWE ayaa rajeynaya in ay helaan maalgelin si ay u buuxiyaan ujeeddooyinka ay muddada dhexe.
Nagu soo biir in safarkan oo Ilaah u barya WAXBARASHADA LIVINGWAY shaqada sida ay u doonaya in la dhiso kartida bulshada in ay ka gudbaan xirfadaha yaraanta, loo hubiyo sugnaanta cuntada iyo dhiiri horumarinta xirfadeed ee macallimiinta.
Waxaan jeclaan lahaa in aan ka maqalno kuwa tukanayay oo ka qeyb qaadatay shaqo this. All horumarka run keenaysaa in isku filnaashaha laakiin haddii ay si dhab ah waa shuqulkii Ilaah ina siiyey in ay sameeyaan waxa ay ku bilaabmaa salaada.
Haddii aad rabto in aad wax dheeraad ah oo ku saabsan barnaamijyada ama hawlaha LIVINGWAY WAXBARASHADA qortaa i ogaysii, Jamie Jamieson, at info@sentafrica.org